6 Ihe Nlere nke Uzo ahia di itoru n’oge oria ojoo a | Martech Zone
Na mbido ọrịa a, ọtụtụ ụlọ ọrụ belatara mgbasa ozi ha na azụmaahịa ha n'ihi mbelata ego ha na-enweta. Businessesfọdụ ụlọ ọrụ chere na n'ihi oke ịchụpụ ndị ahịa, ndị ahịa ga-akwụsị mmefu ka mgbasa ozi na mmefu ego wee belata. Lọ ọrụ ndị a akpakọtara na nzaghachi maka nsogbu akụ na ụba.
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ na-ala azụ ịga n'ihu ma ọ bụ ịmalite mkpọsa mgbasa ozi ọhụụ, ụlọ ọrụ telivishọn na redio na-agbasi mbọ ike iwebata ma debe ndị ahịa. Alọ ọrụ na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa nwere ike iji ohere a nyere aka n'akụkụ abụọ aka imeri ihe isi ike na-akpata ọrịa. Dika ahia ahia nke Silver Frog huru, nke a nwere ike ibute mgbasa ozi na mgbasa ozi ahia nke nyeere aka igbasa ulo oru n'oge oria a. Nke a bụ otu azụmaahịa siri nwee ike ito n'oge ọrịa a, na omume iburu n'uche mgbe ị na-ewu mgbasa ozi mgbasa ozi na-efe efe.
Dịka ndị azụmaahịa na-ele ka paịpụ ha kpụkọrọ akpụkọ mgbe ọrịa a na-efe, ndị isi rụrụ ọrụ iji debe ma bulie mmekọrịta kama ịdabere n'atụmanya Ọtụtụ ụlọ ọrụ mere nkwaga itinye ego na mgbanwe dijitalụ dịka ndị ọrụ ha anaghị arụ ọrụ na ikike ebe ọ na-ebelata mmetụta na arụmọrụ niile. Site na ịkwaga na na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, ụlọ ọrụ nwere ike ịchụpụ arụmọrụ.
Na mpụga, Mbugharị na nyiwe siri ike mepere emepe iji nyekwa ahụmịhe ndị ahịa ka elu. Mmezu nke njem ndị ahịa, dịka ọmụmaatụ, mere ka mmekọrịta, uru, na ohere dị elu na ndị ahịa ugbu a. Mmetụta nke ime na mpụga pụtakwara ọtụtụ dollar ma nye usoro ntọala maka ire ere ahịa ka akụ na ụba laghachiri.
Kpakorita Na The Front End
Maka ụlọ ọrụ telivishọn na redio, ọrịa a mere ka amaghị ihe ọ bụla n'ihi mgbanwe nke mmefu ego na mgbasa ozi na-adọta mgbasa ozi mgbasa ozi ha. Ọ bịara doo anya na ụlọ ọrụ na ọdụ kwesịrị ịrụ ọrụ ọnụ iji nyere aka mejupụta mkpa ha. Rụkọ ọrụ ọnụ na ọdụ iji kparịta ọnụego na njedebe n'ihu nwere ike ọ bụghị naanị ịba uru ọdụ ahụ, kamakwa baara onye ahịa gị uru.
Chọta ihe dịka ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị na ụfọdụ usoro ịzụ ihe iji kwalite mkparịta ụka iji nweta ọnụego dị ala maka ndị ahịa niile bụ ihe nwere ike ịbụ isi maka mkpọsa ndị a. Ozugbo ị belata ọnụego gị, ọnụ ahịa gị kwa nzaghachi ga-ebelata ma mgbe ROI na uru gị ga-arị elu.
Christina Ross, onye nchoputa nke Silver Frog Marketing
Site na mkparịta ụka ọnụego ndị a tupu ị gwa onye ahịa gị, ị kpọchiri ọnụego ụlọ ọrụ nwere ike isiri ndị asọmpi ike iti. Kama mkparịta ụka nke ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ, mkparịta ụka na njedebe n'ihu nwere ike ịnye ọnụahịa a na-achọghị iche iche maka ọdụ na onye ahịa ahụ.
Nkwanye ugwu ma debe mmefu ego ndi ozo
N'oge ọrịa a, ụlọ ọrụ na-ala azụ iwepụta nnukwu mmefu ego n'ihi enweghị mgbagwoju anya na obi abụọ ndị ahịa ga-emefu ego. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa maka ụlọ ọrụ ka ha nwee ike isetịpụ ego na-aga nke ọma, ma kwanyere ha ugwu ka agbamume ya.
Na-amalite mgbe niile site na mmefu ego nke ị kwadoro. Nwere ike ime nke a site na nyochaa ọnụego ndị gara aga, ahụmịhe, na ihe rụụrụ gị na ụlọ ọrụ gị. Site na itinye akara ngosi ndị a, ị ga - enwe nghọta doro anya banyere ihe ịkwesiri iji mefu iji nweta ego ị ga-enweta.
Nghọta a na isoro ndị ahịa na-ekwurịta okwu n'eziokwu n'oge ọrịa a na-ebute oke ihe ịga nke ọma. Site na nyocha data ahịa, na-anọrọ n’elu ọnụego na ijide ọdụ maka oge ha na-agba ọsọ iji nweta kredit, ụlọ ọrụ nwere ike ibute nnukwu mmeri maka ndị ahịa ha.
Nwee Oge Na-agbanwe Agbanwe
Ọrịa ahụ agbasiela ike ịnyagharịa n'ihi na ọ bụ ihe na-enweghị atụ. Anyị enweghị nghọta na nnukwu nsogbu ma ọ bụ nsogbu nke ọrịa na-efe efe naanị n'ihi na anyị enwetụbeghị nke a. N'oge a, ọ dị mkpa maka mgbasa ozi ịkpọsa ka ịnwe mgbanwe.
Naanị ịdebanye ndị ahịa akwụkwọ maka izu abụọ, ma ọ bụ otu ọnwa, n'otu oge na-enye ohere maka ezigbo mgbanwe. Nke a na-enye ụlọ ọrụ ohere inyocha nọmba wee kpebie ahịa, ọdụ, na ụbọchị ndị kachasị mma na ebe mkpọsa na-akụ ka ị wee nwee ike ilekwasị anya na ndị na-eme nke ọma kama ịhapụ ego onye ahịa gị.
Mgbanwe a na-enye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ohere ịkwado mkpọsa ha mgbe niile iji nweta ROI dị elu. Dika ebe nsogbu kachasi ike na-agbanwe ma ndi ochichi ochichi gbasaa banyere imeghe, ikwe ka mgbasa ozi gi nwee ike igbanwe mgbanwe mgbe nile na enyere ndi mgbasa ozi gi aka ighari na ihe ndi anyi na echeghi ugbu a. Mgbatị ndị ọzọ na ogologo oge ga-emebi dollar mgbasa ozi ma rụpụta nzaghachi dị ala na ụgwọ dị elu kwa oku ọ bụla.
Ebumnuche Oge ehihie
N'oge ọrịa a na-efe efe, a na-ahapụ ụfọdụ ndị na-azụ ahịa ka ndị ọzọ na-arụ ọrụ site n'ụlọ.
Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ndị ahịa na-ekwupụta ntakịrị nchegbu gbasara ikuku n'oge ụbọchị n'ihi echiche na-ezighi ezi na ndị niile na-ekiri TV n'oge ụbọchị enweghị ọrụ. Nke ahụ abụghị eziokwu, ọbụnadị tupu ọrịa a efe efe, mana ugbu a, ọ pere mpe ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ. ”
Steve Ross, ngalaba-nchoputa nke Silver Frog Marketing
Ebe ọtụtụ mmadụ na-ekiri telivishọn ma na-egekwa redio, ọnụego maka ọnụego oku ọ bụla dara. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ nke pụtara na ndị mmadụ na-ahụ mgbasa ozi ngwaahịa ahụ ma na-akpọ ya.
Ọ dị mkpa iji ohere ndị a mee ihe ebe ọ bụ na ndị na-ege ntị na-aga n'ihu ịgbanwe. Site na ịbanye na ndị na-ege ntị ọhụrụ a, a ga-etinye ngwaahịa gị n'ihu ọtụtụ ndị nwere ike itinye ego. Ọ na-enyekwa ohere ịnweta ndị ị na-agaghị enwe ike iru tupu ọrịa a ebute n'ihi usoro ọrụ na-arụsi ọrụ ike na obere nlele sitere na ụfọdụ ọnụọgụ.
Zụlite Usoro Mmetụta Pụrụ Iche
Mgbe ndị ahịa na-azaghachi mgbasa ozi mgbasa ozi, nanị ịjụ ebe ha hụrụ mgbasa ozi ahụ nwere ike bụrụ ihe dị ize ndụ. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ oge, ndị na-azụ ahịa na-elekwasị anya na ngwaahịa a nke na ha anaghị echeta ebe ha hụrụ ya. Nke a nwere ike iduga na mgbasa ozi na-eduhie eduhie site na enweghị nsogbu nke ndị ahịa.
Iji nyere aka tụọ mgbasa ozi, ọ kachasị mma iji ọnụọgụ 800 ziri ezi maka azụmaahịa ọ bụla. You nwere ike ijikọ ha ma nwee ọnụ ọgụgụ ndị a ka ha dọọ n'otu ebe ịkpọ oku maka ọdịmma nke onye ahịa gị. Site na ịnye ọnụ ọgụgụ ziri ezi maka mgbasa ozi ọ bụla, ịnwere ike ịgbaso ebe oku na-abịa ma mepụta akụkọ ziri ezi karị. Wayzọ a, ị maara kpọmkwem ọdụ ndị na-erite uru maka ndị ahịa gị ka ị wee nwee ike ịga n'ihu na-emechi ụzọ isi nweta ego na-aga nke ọma ma wuo ROI.
Nọmba ndị a nwere ike inye aka mgbe ị na-aghọta ọdụ na ahịa mkpọsa gị kwesịrị ịga n'ihu na-elekwasị anya. Site na enweghị nzaghachi ziri ezi nke nzaghachi, ọ nwere ike ọ bụghị naanị imebi mkpọsa gị, kamakwa ọ ga-ewute mmefu mgbasa ozi gị.
Uto Oria Na-efe efe
Dika ahia ahia nke Silver Frog chere ihu na ulo oru ndi n’amaghi ma ha ga adi ndu na oria ojoo a, ha gara n’ihu n’inweghachite oganihu ha gara aga. Site na mmefu ego nke ndị ahịa na-eto eto 500%, iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa na nzaghachi site na 66%, ha nyeere ụlọ ọrụ aka ịba ụba ego na nloghachi na itinye ego na oke ọrịa a; niile mgbe ha na-emefu ego karịa ka ha jiri.
Ugbu a, ọ dị oke mkpa ka ụlọ ọrụ gaa n'ihu na-akpọsa iji nwetaghachi ihe mfu ọ bụla wee gaa n'ihu na-eto.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ga-achọ ịmụtakwu gbasara ndụmọdụ na aghụghọ iji meziwanye mkpọsa mgbasa ozi n'oge ọrịa a, gaa na Ahịa Silver Frog website.
Tags: ịkpọsammefu egommụba azụmahịanje Coronamgbanwe ntanetịaku na ubamgbanwe ogeọrịaire egoahịa atụmkpakorita ahiaoge ahialelee oghere ụbọchị
Dave Hatcherson kwuru
Mee 6, 2021 na 5: 46 AM
Ọrịa ahụ jisi ike nke ukwuu. Ma ndị nwere ike ime mgbanwe maka ọnọdụ ọhụrụ ahụ diri. Na-akpali ma na-enye ihe ọmụma. Daalụ!